အာယာသွလ္လာဟ် ဟာဂ်ျ ရှိက်္ခ မိုဟမ္မဒ် ဂျအ်ဖရ် အလ်ဟာဒီ ( ခွရ်ှနဝီးစ်) အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် အမိန့် ခံယူ
ဒီဇငျဘာ ၃, ၂၀၂၀ - ၁၁:၄၈ ညနေ News Code : 1091992 Source : ABNA Link:
ဟောင်ဇေလ်အေလ်မီယေ ကွမ်း ၏ အကျော်အမော် ထိပ်တန်း ဆရာကြီးများ တွင် ပါဝင်ပြီး မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) ( علیهم السّلام) အေလ်မီ အဖွဲ့ ဝင် တစ်လည်း ဖြစ်သူ အာယာသွလ္လာဟ် ဟာဂ်ျ ရှိက်္ခ မိုဟမ္မဒ် ဂျအ်ဖရ် အလ်ဟာဒီ ( ခွရ်ှနဝီးစ်) သည် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် အမိန့် ခံယူသွား ကြောင်း ဝမ်းနည်း စွာ သိရှိရပါတယ်။
ဟောင်ဇေလ်အေလ်မီယေ ကွမ်း ၏ အကျော်အမော် ထိပ်တန်း ဆရာကြီးများ တွင် ပါဝင်ပြီး မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) ( علیهم السّلام) အေလ်မီ အဖွဲ့ ဝင် တစ်လည်း ဖြစ်သူ အာယာသွလ္လာဟ် ဟာဂ်ျ ရှိက်္ခ မိုဟမ္မဒ် ဂျအ်ဖရ် အလ်ဟာဒီ ( ခွရ်ှနဝီးစ်) သည် ဒီဇင်ဘာလ ၃ရက်နေ့ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ကြာသပတေးနေ့ တွင် သက်တော် ၇၄ နှစ်အရွယ် တွင် နှလုံးရောဂါ ကြောင့် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် အမိန့် ခံယူသွား ကြောင်း ဝမ်းနည်း စွာ သိရှိရပါတယ်။
မရ်ဟွန်မ် အာယာသွလ္လာဟ် ဟာဂ်ျ ရှိက်္ခ မိုဟမ္မဒ် ဂျအ်ဖရ် အလ်ဟာဒီ ( ခွရ်ှနဝီးစ်) သည် အစ္စလာမ်မီ ပညာရပ်ဆိုင်ရာများ ဖြစ်သည့် ဖေက် ၊ ဟဒီးစ် ၊ အကာအေဒ် ၊ ကလါမ် ၊ နှင်မဇာ ဟေဗ် တို့တွင် မိုဂျဟစ်ဒ်အဆင့် အထိ ပညာ တတ်ကျွမ်းပြီး မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) ( علیهم السّلام) အေလ်မီ အဖွဲ့ ဝင် ဖြစ်သည့် အလျှောက် တန်ဖိုးကြီး စာအုပ်များ သီးကုံးရေး သား ထားခဲ့ပါတယ်။
မရ်ဟွန်မ် အာယာသွလ္လာဟ် ဟာဂ်ျ ရှိက်္ခ မိုဟမ္မဒ် ဂျအ်ဖရ် အလ်ဟာဒီ ( ခွရ်ှနဝီးစ်) ရေးသား သီးကုံးခဲ့သည့် ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သည့် စာအုပ်များ မှ အချို့ ကို အောက်ပါအတိုင်း မူရင်း ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
1.کلمات للشباب/ عربى1385ه.ق
2. القرآن فى احاديث النبى(ص) و اهل بيته(ع )/ توسط شيخ جعفر شيخ الاسلامي تحت عنوان (قرآن کريم در احاديث اسلامي) ترجمه شده است.
4.کان رسول الله (حاوي 200 شهادت و اعتراف از ناحيه موافق و مخالف رسول اکرم صلي الله عليه و آله در زمينه اخلاق فردي و اجتماعي آن بزرگوار / به زبانهاي فارسي ، اردو ، اندونزي ، کردي ترجمه شده است.
မရ်ဟွန်မ် အာယာသွလ္လာဟ် ဟာဂ်ျ ရှိက်္ခ မိုဟမ္မဒ် ဂျအ်ဖရ် အလ်ဟာဒီ (ခွရ်ှနဝီးစ်) ရေးသား သီးကုံး ထားသည့် الحقیقه کما هی စာအုပ် သည် အနှစ်ချုပ် အတိုချုပ် ၊ အကျဉ်းချုပ် စာအုပ် ဖြစ်ပြီး ရှီအာ မဇ်ဟဗ် ကို သေသေချာသေချာ နားလည် သဘောပေါက်အောင် မိတ်ဆက်ထားပေပြီး ရှီအာမဇ်ဟဗ်အပေါ် စွပ်စွဲထားသည့် စွပ်စွဲချက်များ ကိုလည်း အဖြေပေး ဖြေကြားထားပါတယ်။ ဤစာအုပ်အား မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) ( علیهم السّلام) မှ ကမ္ဘာ သုံး သာသာ စကား ၂၈ ဘာသာဖြင့် ဘာသာပြန် ထုတ်ဝေ ခဲ့ပါတယ်။
မရ်ဟွန်မ် အာယာသွလ္လာဟ် ဟာဂ်ျ ရှိက်္ခ မိုဟမ္မဒ် ဂျအ်ဖရ် အလ်ဟာဒီ (ခွရ်ှနဝီးစ်)သည် ရှိအာ မဇ်ဟဗ် အတွက် နိုင်ငံပေါင်းများစွာ သို့ သွားရောက်ပြီး သာသနာပြု ခဲ့ပါတယ်။